रेखाको सपोर्ट कता–कता ? « Mazzako Online
रेखाको सपोर्ट कता–कता ?
अभिनेत्री रेखा थापा आफ्नो फिल्मको प्रचार त बेजोड तरिकाले गर्छिन् नै । तर, रेखा अहिले अरु निर्माताको फिल्म प्रचारमा पनि देखिन थालेकी छिन् । उनले माघ २९ गतेबाट रिलिज भएको फिल्म ‘प्रेमगीत’को प्रचार खुबै जोडतोडका साथ गरेकी थिइन् ।
रेखाले यो फिल्मलाई यतिसम्म साथ दिइन् कि, फिल्मको सफलता पार्टीमा आफैले केक पनि उपहार पठाइन् । सोही दिन रिलिज भएको फिल्म ‘क्लासिक र चलेछ बतास सुस्तरी’को बिषयमा रेखाले कुनै शब्द बोलिनन् । अहिले रेखा अर्को फिल्मको प्रचारमा पनि देखिइन् ।
आफूले अभिनय गरेको फिल्म ‘बाटो मुनिको फूल’को सिक्वेलका प्रचारमा रेखा सक्रिय देखिइन् । उनी फिल्मको विशेष शोमा समेत उपस्थित भइन् । जबकी, रेखालाई फिल्म ‘हाउ फन्नी’को प्रिमियरमा पनि बोलाइएको थियो, उनी पुगिनन् ।
रेखाले २ महिना अगाडि बोलेको शुभकामनालाई फिल्म ‘हाउ फन्नी’को टिमले प्रचार त ग¥यो । आखिर, रेखाको साथ कुन फिल्म र कुन कलाकारलाई हुन्छ, पत्तै नहुने ।